Waa maxay Deynta Lacageed? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks Wicitaan credit
Waa maxay credit call?
Der Wicitaan credit sidoo kale waa amaahda amaahda amaahda amaah lacagta qalaad loo yaqaan. Dad badan iyo gaar ahaan ganacsatadu waxay isticmaalaan noocan oo kale ah ee deyn ahaan sababtoo ah waxay leeyihiin dulsaarka hooseeya ee dibedda ah, sidaas darteedna waa inay dib u bixiyaan wax yar. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira faa'iidooyin iyo sidoo kale faa'iido daro. Sababtoo ah sicirka dulsaarku ma aha mid la mid ah sida deynta, taas oo lagu daray habka, wax isbeddel ah ma laha. Taas macnaheedu waa in qiimaha dulsaarka la bedeli karo lana hagaajin karo. Tani waxay noqon kartaa faa'iido darro haddii aad rabto inaad hubiso inaad hesho lacag badan. Muhiim u ah kumbuyuutarradu waa muddada dib u bixinta. Ma ahan inay aad uga sarreyso bilawga.
Qof kasta oo u maleynaya inuu dib u bixinayo deyn muddo dhowr sano ah waa inuu ogaadaa waqtigaan waqtigaan la isku daro wuxuu noqon karaa mid aad u sarreeya iyada oo loo marayo dulsaarka. Haddii aad rabto inaad isticmaasho credit call, waa inaad ogaataa in tani ay tahay in ugu yaraan 50.000 Euro. Sidaas darteed deyntu ma fududa in la nuugo. Laakiin wax walbana waa ay ku dhacaan maanta internetka. Deymaha ayaa laga codsan karaa internetka, sidaas darteed qof kasta wuxuu leeyahay isla markiiba ogaysiis, haddii uu shaqeeyay. Faa'idada deyntaas waa mid aad u weyn. Koontada wicitaanku waa in la bixiyaa muddada cayiman. Had iyo jeer waa muhiim inaad ku dhegto dhamaan fursadaha aad leedahay. Qof kasta oo doonaya inuu isticmaalo deynkaas waa inuu sidoo kale awood u leeyahay inuu bixiyo amar. Laakiin tani sidoo kale waa arrin deyn ah halkan. Waa inaad si taxadar leh u miisaantaa oo aad si fiican u wargelisaa haddii dariiqa yeedhitaanku yahay bedel wanaagsan. Waxaad arki doontaa in si fiican lagula talin karo, ka dibna waxaad haysataa wax yar oo ka mid ah lacagta aad rabto. Kaliya miisaanku waa inaad si fiican u fekertaa.
Xalka ugu fiican ee ganacsatada
Ma waxaad tahay qof ganacsade ah? Kadibna deyn baaqi ah ayaa adiga kuu fiican. Sidaas darteed waxaad dhisi kartaa shirkaddaada ama kaydin kartaa. Waxaad arki doontaa bangiyada intooda badan inay ku faraxsan yihiin inay kula shaqeeyaan. Wixii credit call, bangiyada badan oo furan yihiin iyo maanta waxaa jira dhab ahaan sidoo kale wax faa'iido leh oo leh. Inkasta oo ay kuwani soo kici karaan, laakiin haddii aad si wanaagsan u soo wargeliso, horey wax u dhaco. Waxaad heli doontaa qandaraas caadi ah oo aad sidoo kale hubin karto. Waa in aysan jirin duruufo xadhig lakirsan. Sidan oo kale, waxaad si buuxda u hubineysaa inaad markaa isticmaali karto lacagta aad u baahan tahay. Deynkaas oo kale wuxuu u fiican yahay dadka gaarka ah. Kuwani waa, si kastaba ha ahaatee, waxay eegaan agagaarka internetka oo fiiri macalimiinta bixiya xaalado wanaagsan. Deynta badankood waxay kaa xanaajineysaa, laakiin waa inaad taxaddar samaysaa. Si taxadar leh u akhri oo u hubi xaalad degdeg ah. Haddii aadan hubin, waxaad sidoo kale wici kartaa bangi kale Si aad u dalbato deyn.
Waa inaad eegtaa qiimeynta macaamiisha kale si kasta oo ay u helaan macluumaad dheeraad ah. Haddii macaamiishu aysan ku qanacsanayn, waxay hubaal ahaan doonayaan inay arrintaan ku wargaliyaan mashaariicda kala duwan. Sidaa darteed, waxaa lagugula talin karaa oo kaliya in aad wax raadisid oo aad raadisid ka hor intaadan wacin credit dibadda. Waxaad arki doontaa sida ugu dhakhsaha badan ee deynta loo ansixiyay. Markaa waxaad u isticmaali kartaa lacagta ujeedada. Hubi inaad adigu karti u leedahay in aad mashruuckaaga u dhigto si ficil ah oo aan waxba ku xirneyn sida aad rabto.
Maqaalka horelacagta amaah
Maqaalka xigtamaalgelinta dheeriga ah